ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းခရီးစဉ် ထိုင်းအစိုးရ ကန့်သတ်
ထိုင်းအစိုးရဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေးထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်း ခရီးစဉ်မှာ အကန့်အသတ်တွေ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မယ်လ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်စခန်းကို မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က သွားရောက်ရာမှာ လူထောင်ပေါင်း များစွာက ကြိုဆိုနေစဉ်။
အကြီးဆုံး ဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်တဲ့ မယ်လစခန်းကို သွားရောက်ခွင့်ရဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ထိုင်းအစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့ လူထုဟောပြောပွဲ လုပ်ခွင့်မပြုတဲ့အပြင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ခွင့် မပြုခဲ့ပါဘူး။
နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေကိုလည်း သတင်းယူခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ နယူးယောက်တိုင်းက ရေးသားပါတယ်။
မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းရှိရာ တပ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆူရီယာ ပရာဆပ် ဘန်တစ်ယာက - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်း ခရီးစဉ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သိပ်လူသိမခံဘဲ သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်ဖို့ ပြောထားပါတယ်။ သတင်းထဲလည်း မပါစေချင်ပါဘူး။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေး ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်နေတယ်လို့ နယူးယောက်တိုင်းကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေစဉ်အတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ သူ့ရဲ့ထိုင်း ခရီးစဉ်ကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ ထိုင်းပြင်ဆင်နေ
ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သား အရေး ကူညီသူတွေ ထိုင်းအစိုးရရဲ့စောင့်ကြည့်ခံနေရ
ထိုင်းရောက် မြန်မာတွေကို သံရုံး သတိပေး
ထိုင်းမှာ မြန်မာအလုပ် သမားတွေ ပြန်ပို့ခံနေရ
ထိုင်းလူသတ်မှု DNA ဖမ်းဆီးခံ မြန်မာတွေနဲ့ မတူ
ထိုင်း အလုပ်သမား အေဂျင်စီတွေကို နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်း
ထိုင်းအရာရှိတွေ အရေးယူ မှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်ခြင်းမရှိ
မြန်မာနိုင်ငံသား ၄ ဦးကိစ္စ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ထိုင်းအစိုးရထံ စာရေးမည်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်အောင်လှိုင် ထိုင်းနိုင်ငံ ရောက်ရှိ
မြန်မာလုပ်သားများ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ သမ္မတပြော
stupid Thai, you are just looking for your Business with Burmese authority and did not allow Daw Su to speak in refugee camp. You know? in the future when when we have democracy and good government, we will not do Business with the selfish other government countries which just look for their Business.
Jun 03, 2012 03:36 AM
နယ်စပ်တနေရာ အုပ်စုပေါင်းစုံ တည်ရှိနေတဲ့အတွက် လုံခြုံရေးအတွက်ကန့်သတ်တာလို့မြင်ပါတယ် ဒုက္ခသည်စခန်းကိုသွားကတည်းက ပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားတွေကို မေ့မထားဘူးဆိုတာ ပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် တာဝန်ကျေပါတယ် အမေ....
Jun 03, 2012 01:54 AM